Thrones ၏ဂိမ်း: ကိန်းဂဏန်းများအတွက်ရင်သား, တင်ပါးနှင့်လိင်တံ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ Thrones ၏ "ဂိမ်း: ကိန်းဂဏန်းများအတွက်ရင်သား, တင်ပါးနှင့်လိင်တံ
WinterfellThrones ၏ဂိမ်း၏ 8 ရာသီ၏ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ထို့နောက်တိုင်အောင်, ဆိုက်မစ္စတာအရေပြားအတွက်ခွံရှိပါတယ် ဗလာ နာမည်ကျော်အလယ်ခေတ်စီးရီး။ အားလုံးအတွက်, ပထမဦးဆုံးရာသီအတွက်သရုပ်ဆောင်များကိုအဝတ်အချည်းစည်းရှိသည့်နေရာကို7108 မိနစ် sequence ကိုပါဝင်သည်။
ဗြိတိန်လူရွှင်တော် Got ဟုခွငျးအားဖွငျ့အခွအေနအကျဉ်းချုပ် "ရုံရင်ပတ်နှင့်နဂါးဖြစ်၏။ " အဆိုပါ 108 မိနစ်မှာတော့ပရိသတ်တွေမှကုသခဲ့ကြသည် 134 ရင်သား, 60 အားလုံးအတွက်အမျိုးသမီးများ၏နောက်ဘက်, 287တန်းတူရေးနှင့်အထီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ.
51 ကလူသည်ဤဖြစ်စဉ်များအတွင်းမှာအဝတ်အချည်းစည်းသည်ထင်ရှားကတည်းကနီးပါးအပေါငျးတို့သသရုပ်ဆောင်များကိုဂိမ်းကစားကြသည်။ အမျိုးသမီးများက ပို. များပြားဖြစ်ကြသည် ကျနော်တို့လူတို့သညျဆန့်ကျင် 36, 15 ရေတွက်ကတည်းက။ မစ္စတာအရေပြား၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, မင်းသမီးနှစ်ဆမပေးခဲ့ပါဘူး။
လီနာ Headey (Cersei Lannister) တစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ကတည်းကထုတ်လုပ်မှုစူပါငှားရမ်းထား ရေဗက္ကာဗန်၌မှီဝဲ အရှက်ကွဲခြင်း၏ကျော်ကြားလမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းကအစားထိုးရန်။ အဆိုပါ sequence ကိုအကြောင်းကိုဆယ်မိနစ်ကြာမြင့်ခြင်း, မင်းသမီးပြီးတော့လူအစုအဝေးသို့အဝတ်အချည်းစည်းသွားလာ၏။
>>> ကိုလည်းဖတ်ရန်: အမေရိကန်စာနယ်ဇင်းသူမကအဘယ်သို့ထင်ပါဘူး, အ E01S08 မြင်ဘူးသနည်း
BGR - SpaceX စွန်ငှက်အကြီးစား၏သူ၏ဒုတိယက start အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် feat အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်